GRG acoustic yolawulo-GRG Acoustic Ibhodi-Nanjing BeiLiDa Entsha Mathiriyali Indlela Engineering Co., Ltd.
Ulapha : Ikhaya>imveliso>IBhodi ye-Acoustic yeGRG
Iphaneli ye-acoustic yeGRG
Inani Model: Iphaneli ye-acoustic yeGRC
I-GRG inamathela kumgaqo wokwenza ukuba ube mncinci kodwa ungabi manzi. Iqondo le-Bionic + inqanaba lokudluliselwa kwesandi + inqanaba lokufakelwa kwesandi = 1, ukufezekisa isiphumo se-acoustic yesandi esivumayo somoya ojikelezayo.
1. Akukho ntsingiselo
Njengoko i-GG ephambili yezinto ze-gypsum ayinayo nayiphi na impembelelo ewonakalisayo kwiifayile zeglasi, kwaye iqondo lomanzi le-shrinkage elomileyo lingaphantsi kwe-0.01%, imveliso inokuqinisekiswa ukuba inokusebenza okuzinzileyo, ukuqina, ukungabikho kokuqhekeka, akukho lutshintsho kunye nobomi benkonzo ende.
2. Ubunzima bokukhanya
Ubungqingqwa obuqhelekileyo becandelo leemveliso ze-GRG ngu-3.2 kuye ku-8.8MM (bunokuqiniswa ngeemfuno ezizodwa), kwaye ubunzima ngokweemitha zesikwere kuphela ngu-4.9 ukuya kwi-9.8KG, obunokunciphisa ubunzima besakhiwo esikhulu kunye nomthwalo zezinto.
3. Amandla amakhulu
Uvavanyo lubonisa ukuba umthwalo weqhekeza leemveliso ze-GRG ungaphezulu kwe-1200N, ephindaphindwe kalishumi kunomthwalo we-10N ye-JC / T118-799 yamanye amazwe e-1998.
Iplastiki ye-GRG yipleyiti enenombolo enkulu yeemicropores. Kwimeko yendalo, umzimba we-porous unokufumana okanye ukhuphe amanzi. Xa amaqondo obushushu angaphakathi aphezulu kwaye umswakama uphantsi, ibhodi ngokuthe ngcembe ikhupha umswakama kwii-micropores; Xa amaqondo obushushu angaphakathi esezantsi kwaye ubumswakama obuphezulu, buyawufunxa umswakama emoyeni. Oku kukhutshwa kunye nokuphefumla kuyindlela yokuphefumla. Olu tshintsho lwe-cyclic lokuthathwa kokufuma kunye nokukhutshwa kwendima kudlala indima yokulungelelanisa amaqondo obushushu endlu yangaphakathi kunye nokwenza i-microclimate ekhululekileyo kwimeko yokusebenza kunye nendawo yokuhlala.
5. Ukuthintela umlilo
Izinto ze-GRG zezinto ezikwiClass A ezingenakho umlilo. Xa umlilo usenzeka, izinto zeGRG azinakuba kukubuyisa idangatye kuphela, kodwa zikhuphe ne-15% ukuya kwi-20% yobunzima bayo bamanzi, elinokulinciphisa kakhulu iqondo lobushushu bendawo yokulahla kunye nokunciphisa ukulahleka komlilo.
6. Ukukhuselwa kwendalo
Izinto ze-GRG azinamphunga, kwaye umda we-radionuclide ungqinelana nomgangatho weKlasi A wokuhombisa ocaciswe kwi-GB6566-2001. Kwaye zezinto eziluhlaza kunye nokusingqongileyo ezinobuhlobo.
7. Iziphumo ezintle ze-acoustic
Iziphumo zovavanyo zibonisa ukuba isixhobo seGRG esinobunzima be-4MM singena kwi-500 Hz 23 d 100 Hz 27 db. Amandla omoya okhethekileyo womoya ngu-1.75, ohlangabezana neemfuno zokubonakaliswa kwe-acoustic. Ngokwenza imodeli elungileyo yokuyila, kunokubakho isakhiwo esifanelekileyo sokufunxa isandi ukufezekisa ukufakelwa kwesandi kunye nokufakwa kwesandi.
8. Umjikelezo omfutshane wokusebenza
Ixesha lokudilizwa kweemveliso zeGRG lithatha kuphela imizuzu engama-30 kwaye ixesha lokomisa lithatha iiyure ezi-4 kuphela. Ke ngoko, ixesha lokwakha linokushitshiswa kakhulu.
9. Ulwakhiwo olululo
I-GRG inokwakheka ngokungakhethi ngokungqinelana noyilo lomyili, kwaye inokuveliswa kwaye yahluleke kwiibhloko ezinkulu. Ukusebenza kwendawo yokusebenza kulungile, ufakelo luyakhawuleza kwaye luyaguquguquka, kwaye indibano enkulu engenamthungo inakho ukuqhutywa ukwenza ubume obugqibeleleyo. Ngokukodwa umngxunya, i-arc, ikona kunye namanye amanqaku amahle, unokuqinisekisa ukuba akukho mpazamo.
10. Umphezulu wezinto ezibonakalayo zigudile kwaye zintekenteke.
Ubumhlophe bufikelela ngaphezu kwe-85%, kwaye banokudibaniswa kakuhle kunye neengubo ezahlukeneyo kunye nezixhobo zokuhombisa umphezulu ukwenza umphumo omuhle kakhulu.